Tag: email lifaaq | Martech Zone
Tag: email lifaaqa
Naqshadeynta E-mailka: 6 Astaamood Oo U Baahan Dib-U-Fakirid
Khamiista, Oktoobar 8, 2015 Khamiista, Oktoobar 8, 2015 Richard Smullen
Waxay kuxirantahay qofka aad weydiiso, emaylku wuxuu jiray inta udhaxeysa 30 ilaa 40 sano. Qiimaheeda waa iska cadahay, iyadoo codsiyada ku baahsan dhinacyada bulshada iyo xirfada nolosha labadaba. Waxa kale oo u muuqda, si kastaba ha noqotee, waa sida tikniyoolajiyadda e-mailka ee waqtigeedu dhacay ay runti tahay. Siyaabo badan, emaylka ayaa dib loogu habaynayaa inuu ahaado mid ku habboon baahiyaha sii kordhaya ee isticmaalayaasha maanta. Laakiin intee jeer ayaad ku yareyn kartaa wax ka hor intaadan qirin in laga yaabo inuu waqtigiisii ​​dhaafay.